Tag: xawaaraha goobta | Martech Zone
Tag: xawaaraha goobta
Google ayaa ku dhawaaqday in Core Web Vitals -ku uu noqon doono qodob qiimeyn ah bisha Juun 2021 iyo soo -deynta ayaa lagu wadaa inay dhammaato bisha Ogosto. Dadka ku jira WebsiteBuilderExpert waxay isu diyaariyeen xog -ururintan oo dhammaystiran oo la hadasha mid kasta oo ka mid ah Google's Core Web Vitals (CWV) iyo Caqabadaha Khibradda Bogga, sida loo cabbiro, iyo sida loo wanaajiyo cusboonaysiintaan. Maxay yihiin Muhiimada Webka ee Google? Soo -booqdayaasha goobtaadu waxay doorbidaan goobo leh waayo -aragnimo bog weyn. Gudaha
Tuujinta Sawirku Waa Waajib Raadinta, Moobilka, iyo Isbadalidda Beddelka
Markay naqshadeeyayaasha garaafyada iyo sawir qaadayaashu soo saaraan sawiradoodii ugu dambeeyay, sida caadiga ah looma habeyn si loo yareeyo cabirka faylka. Xakamaynta sawirku waxay si weyn u yareyn kartaa cabirka faylka sawirka - xitaa 90% - iyadoon hoos loo dhigayn tayada isha qaawan. Yaraynta cabirka feylka sawirku wuxuu yeelan karaa xoogaa faa'iidooyin ah: Waqtiga Xawaaraha Badan - ku shubista bogga si dhakhso leh ayaa lagu yaqaan inay siiso khibrad sare dadka isticmaala halkaasoo aysan ka heli doonin
Inta aad maamusho diiwaangelinta domainka ee diiwaangeliyaha domain, had iyo jeer maahan fikrad weyn in la maareeyo meesha iyo sida boggaagu u xalliyo dhammaan waxyaabaha kale ee ay geliso ee DNS si loo xalliyo emaylkaaga, subdomains, host, iwm. waxay iibineysaa domains, ma hubineyso in boggaagu si dhakhso leh u xallin karo, si fudud loo maareeyo, oo uu leeyahay dib-u-dhis ku dhisan. Waa maxay Maamulka DNS? Maareynta DNS waa aalado xakameynaya server-ka Nidaamka Nidaamka Magaca